Godina Booranaa: “Mucaa kiyya fuula ummataa duratti ijeessanii akka hin boonne nu sodaachiisan. Awwaaluu nu dhowwuun reeffa mucaa kiyyaa allaattiin nyaatte. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGodina Booranaa: “Mucaa kiyya fuula ummataa duratti ijeessanii akka hin boonne nu sodaachiisan. Awwaaluu nu dhowwuun reeffa mucaa kiyyaa allaattiin nyaatte.
Godina Booranaa: “Mucaa kiyya fuula ummataa duratti ijeessanii akka hin boonne nu sodaachiisan. Awwaaluu nu dhowwuun reeffa mucaa kiyyaa allaattiin nyaatte.
Namni mucaa kiyyatti dhukaasee ijjeese bulchaa aanaa Miyoo, Jaarsoo Annaati.” – Haadha Dargaggoo Galgaloo Waaqoo Galgalooti. Caamsaa 16, 2021 harka duubatti hidhuun Booranaatti ijeessan.
Maatii mucaa dabalatee namni 300 ol amma baqatanii Keeniyaa jiru. Maatii dubbisee jira.
Oromia Media Network Oduu Galgalaa irratti Daawwadhaa!!
Guyo Wariyo Aba-Jirma
Maatiin Dargaggoo Godina Booranaa A/Miyoo ganda Gombisaatti waraanni PP fuula ummataa duratti ijjeeseefi ollaan isaanii biyya Keeniyaatti baqatan.
Iyyanna ykn Arreessa birmannaa dhabee jedhamuun baqii kun sabboontoota haqaa GDhu Oromiyaa kibaatin gabaafameera.
Godina Booranaa Aanaa Miyoo Ganda Gombisaa jedhamu keessatti yeroo darbe Caamsaa 16 /5/2021 Dargaggoo Galgaloo Waaqoo Galgaloo harka duubatti
hidhanii Ummata kora baasaanii haadhaafi Abbaa fuulduratti rasaasan lamaan dha’anii kan ajjeesa ta’uun beekama. karaalee social media hedduu gabaafamas ture.
Dabalataan Olloota gurbaa keessaatti ajjeesan kanaa Keessaa seelii Shanee nama 17 tu jiraa akkanumatti bifa kanaan ajjeefnaa jedhanii warri bulchiisaa ummataatti dhaadatan. Ummanni sodaafi roorrisa jarrii bulchiinsaa dhiitee bariitee itti dhaadatanii fi sodaachisaniif sodaachuun baqateera.
Haala kanaan godina Booranaa aanaa Miyoo ganda Gombisaa kan qubatu Ummanni Ardaa “Goda Lookoo”fi Goda_Gootuu” jedhamu manneen 300 ol ta’an qabeenyaaf qe’ee isaanii gadi lakkisuun daangaa qaxxaamuruun kaaba biyya Keeniyaa Naannoo Solooloo bakka “Ariyaa” fi Kukkuba ” jedhamutti baqa naannessee jira.
Uummanni kun baayyinaan bakka kana lamaaniitti ha naanna’uu malee, (baqatee qubatu malee) gargar faca’ee Olloota Boorana Keeniyaa kanneen akka Dambalaa Faccanaa, Adaadii, Maddoo Adii fi Solooloo keessatti fira-fiixaa biratti baqa naanneefftaatee jiraachuun barameera.
Ummanni Oromiyaa kibbaa godina Booranaa aanaa Miyoo irraa baqatee kaaba biyya Keeniyaa seenuun naanessee kun garmalee rakkoo keessa jiraachuu himan ijoolleen Gaaddisa Dhugaa kibba Oromiyaa. Akka warrii GDHKO himuutti ummanni kun qabeenna gama xoophiyaatti dhiisee lubbuuf biraa baqatees harka finna bilxiginnaatin saamamaa jiraachuutti himama.
Bifuma kanaan Uummanni kun eegii gaafa caamsa 17,2021 biyya Xoopjiyaa MNO G/Booranaa A/Miyoo irraa baqatee biyya Keeniyaa seeneetii kaasee haga hardhaatti namni isaan dubbise tokkolleen hin jiru.
Ummanni xoophiyaa baqatee biyya Keeniyaa gale kun Uffata, Nyaata, Qorichafi waan tajaajilamuun tokkolleen hin qabu. Amma yeroon kun kibba Oromiyaafi kaaba Keeniyaatti yeroo Bookeen-Busaa itti wal hortu kan ji’a Caamsaa waan ta’eef ummanni dhukkuba Busaatin miidhamaa jira. Mana itti galani fi Uffata waan hin qabneef; daa’imannif jaarroleen qorraan (dhaamochaan) miidhamaa jiru.
Kanaafuu, haala ummanni kun keessa jiru hubachunu Miidiyaaleen Addunyaa, Dhaabbanni Fannoo Diimaa fi Addeessa Diimaa, UN fi Dhaabbani Mirga Dhala namaa Ummata kanaaf akka xiyyeeffannoo barbaachisaa kinnitan maqaa dhala_namatina isan gaafanna!
Akkuma kana Ummanni Oromoo keessaafi ala jirtanis Ummata kanaaf sagalee ta’uun dhaabbilee asiin olitti eeramaniif akka akeektan isaniitit dhaamanna.
US mulls more sanctions on Ethiopia under Magnitsky Act